Haweeneey si la yaab leh u badbaadisay dad ay gurigeeda ku magan galisay - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, JEAN PIERRE BUCYENSENGE
Sumacadeedii ay ilaashaneeysay iyo cabsidii ay ka qabtay, khatarta nimankaan aadka u hubeeysan ayaa u horseedday in haweeneeydan da'da ah iyo boqol qof oo kale ay ka badbadaan xasuuqii ka dhacay dalka Ruwanda.
"xilligii xasuuqa, waxaan arkay mugdiga qalbiiyada ragga," ayay tiri Zura.
Dagaalyahanada Hutu oo ay garab socdaan ciidamada Faransiiska
Qaar ka mid ah dadkii gudaha guriga Zura ku jiray waxaa ka mid ahaa caruur da'yar oo laga soo uruuray iyagoo weli saaran dhabar hooyooyinooda oo meeyd ahaa.
Nin arag la' oo marki ugu horreysay ku guuleystay imtixaanka dugsiga sare
Waxa ay ka soo jeedaa qoys dhirta dad ku daaweyn jiray
Karuhimbi waxa ay maalintii Isniinta ahyd ku geeriyotay tuulo hal saac looga socda magaalo madaxda dalka ee Kigali. Ma jirto cid xaqiijin karo da'deeda saxda ah.
Balse iyada tiradeeda waxa ay leedahay in ay sheegeysaa 100 sano, inkastoo ducumiintiyo qaarna ay qorayaan in ay da'deedu ku dhaweyd 93 sano.